Kuzomele sikhohlwe yisizini edlule - Manyama | News24
Kuzomele sikhohlwe yisizini edlule - Manyama
Johannesburg - Isihlabani seCape Town City uLebogang Manyama sithi ikilabhu kumele ikhohlwe ngokushesha yindlela edlale kahle ngayo ngesizini edlule ukuze izolwela ukufinyelela kwelinye izinga elingcono.
Lo mdlali weBafana Bafana udlale indima enkulu ekwenzeni kahle kweqembu lakhe eliqede isizini lilele endaweni yesithathu ku-Absa Premiership, lathatha nesicoco seTelkom Knockout.
UManyama, oshaye amagoli angu-14 ngesizini ephelile, uthi akummangazanga ukwenza kahle kwakhe ngesizini edlule.
“Cha, nakancane nje,” etshela iKickOff.com. “Kukho konke empilweni, kumele uhlale ufuna ukwenza kangcono, futhi indlela okwenzeka ngayo izinto ebholeni lami, ngicabanga ukuthi njalo uyabonakala umehluko.”
OLUNYE UDABA: Abathandi bebhola bazoyithokozela imititilizo yokuvotela ama-PSL Award
“Kodwa futhi akupheleli lapha. Ngifuna ukuqhubeka nokwenza kangcono.”
“Singaziqhenya ngokwenzekile, kodwa kumele sazi ukuthi kuzoba nzima kakhulu ngesizini ezayo,” esho.
“Kwenzekile e-England kwiLeicester – babanesizini ehle futhi bonke abantu bekhuluma ngabo, kodwa ngenxa yemidlalo yeChampions league neyePremier League ngesizini ephelile, kwabanzima kakhulu kubona. Ngakho kuzomele siqaphele indlela esenza ngayo izinto kusukela manje.”
“Singajabula okwamanje kodwa uma nje iqala isizini entsha, kuzomele sikhohlwe yile sizini.”